PressReader - Isolezwe: 2018-11-08 - IZAZISO
Isolezwe - 2018-11-08 - IZINDABA -
MAKHOSIKHOSI COMMUNAL PROPERTY TRUST: Inhlangano engenhla yazisa umphakathi waKwaQwabe ngasoThongathi owasuswa kubusa inkosi uSiziba Gumede ukuthi usuhlehlesiwe umhlangano obuzoba ngNovemba 10. Lo mhlangano uhlehliselwe uDisemba 8 ngo-9 ekuseni ehholo laseSizibeni. Ngeminye imininingwane ungathinta uMnuz Mabandla Gumede ku-082 834 8624.
MAKHOSANA KASGCWELEGCWELE: Kumenyezelwa umcimbi wokwethula kwenkosana yesizwe sasemaNgadini kuwo wonke umndeni kamaDlokovu kulo lonke izwe. Kumenywa lezi zibongo ezilandelayo: oNgema, Sithenjwa, Ndiyaza noMngadi. Umcimbi uzoba eZikoshi eduze neZinqobele Secondary ngoDisemba 1 ngo-9 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta uMnuz Siboniso Ngema ku-082 772 5683, Mnuz Vincent Ngema ku-083 510 4798 noma uNkk Buyisile Ngema ku-072 614 3960.
MVUYANA : Umndeni wakaMvuyana umema abantu bakwaMvuyana emhlanganweni womndeni ozobe useMadundube, eMbumbulu, kubo kaMzwandile ngoNovemba 10 ngo-11 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta uMnuz Mzwandile Mvuyane ku-078 823 5544.
CHILIZA COMMUNITY LAND CLAIM: Kumenywa wonke umphakathi, isizwe samaDunge ongaphansi kwenhlangano engenhla kukhukhulelangoqo womhlangano wasebelindele izinxephezelo. Umhlangano uzobe usehholo ngaKwaJays, eSayidi, ngoNovemba 10 ngo-9 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta uChiliza ku-083 369 8828 noma uMpilo ku-073 966 2517.